IFTIINKACUSUB.COM: Abaarti la magac baxday ha dhaqaaqin.
Waar anagu waxan aad ka hadlayso ma lihine saani wax noo sheeg adeer.Mida kale ,maxaad uga hadli la`dahay xafladii aad ku sii cararasay
dhalin weeye magaallo.
dhaqankoodu mid maaha .
Dhaliil la iskama qaato .
DHafoor taabasho weeye .
Dhibtana la iskuma eego.
daily way kaftamaan .
Hadana la isma dhegaysto.
Dhoohanaad tahay waalan
iyo adaa dhoocil ka liita
warkoodaa ku dhamaadee .
Kaalayoo bal dhegayso.
Dhaashane:Waar ma maqashay abaartan waxaa loo bixiyey :HA DHAQAAQIN?Dalkii oo dhan bay saamaysay dee.Meel loo dhaqaaqaa ma jirto.
Dhaqane:Yeelkeeda mar hadii Kulmiye laga bedelay e waxaan Kuu sheegayaa afartan wasiir hadaa iska bedeshaan ma ogtihiin in wax badani idiin hagaagi lahaayeen?
Dhaqane:Waa wasiirka qabyaalada.wasiirka qarash ururinta,wasiirka qarsoon iyo wasiirka qooto qootada.
Dhaashane:Waar anagu waxan aad ka hadlayso ma lihine
saani wax noo sheeg adeer.Mida kale ,maxaad uga hadli la`dahay xafladii aad ku sii cararasay eed lahayd waxa imanaya madaxweyne ku xigeenkii mustaqbalka?Anigu ninkan markaan arko Siyaad bare ayaaban xasuustaaye.
Dhaqane:Madaxweyne ku xigeenka mustaqbalku adeer abaaraha ayuu dadka ku wacyi gelinayey.Wuxuu lahaa ,dadkiini wuu bakhtiyayaaye waxba ha ka hakranina .Hadaa ma sidiinaad doonaysaa intuu Burco fadhiisto inuu dadka qabiil u kala qayb qaybiyo?Mida kale ,Horta kuwiinan reer Hargeisa Burco ma NATO iyoWAARSO ayaa u taqaaniin?
Dhaashane:Waar horta socod barta adeer.Madaxtooyada ma waxaad u haystaan meel xisbigii maanta la sameeyaaba beri iska tago?Waar meesha kaadidaadaa loo soo cabaa adeer.
Xisbi garsho dheeroo
abaal ruuxi noo gala
u gudaaya baan nahay
Guud ahaan dadweynaha
Waxa lagu garsooraa
Waa cadaalad guunee
Xisbi aan gefaynoo
Garanaaya baan nahay.
Waa qalinkii:Baxnaan x adeen diiriye